နိုဝငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၃ ညနေ News Code : 869747 Source : ABNA Link:
သဝါစိုလ် توسّلကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များ နှင့်အသိဥာဏ်၊ဆင်ခြင်တုံတရားအမြင်၌
နာမ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်၌သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စနှင့်ဝဟာဘီများ၊မွတ်စလင်များအကြားအကွဲအလွဲဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ဝဟာဘီများ၏ခံယူချက်သည်ကားကောင်းမြတ်သောအလုပ်များ ဖြင့်(အလ္လာဟ်ထံတောင်းခံရန်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်ပြဿနာမရှိပေ။သို့ သော် اولياء اللهအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း ကိုခွင့်မရှိသည့်အပြင်ရှေးက် شرك၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပေကြောင်းခံယူ ထားပေသည်။သို့သော်ကမ္ဘာမွတ်စလင်များအနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်၏အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းကိုပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုခံယူထား ကြသည်။
ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ရှေးက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူသောအနေ ဖြင့်အသုံးပြုသောအချို့အာယတ်တော်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပေ သည်။
အထက်ပါအာယတ်တော်သည်အမှန်တကယ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင်မိုရ်ှရေက်များ၏ဘုရားများနှင့်ပက်သက်၍ဖြစ်ပေသည်။ထိုဘုရားများ၌ ကောင်းကင်တမန် တော်များလည်းပါဝင်ပေသည်။
ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ဤအာယတ်တော်များသည်သဝါစိုလ်၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များနှင့်လုပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသော အာယတ် တော်များ ဟုထင်နေကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)၏ ဘဝတွင်ရီဝါယတ်တော်အရ သဝါစိုလ်ပြုခွင့်ရှိကြောင်း လက်ခံလိုက်မည် ဆိုလျှင်လည်းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဝဖသ်ပရိတ် နိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်၊ သဝါစိုလ်ခွင့်ပြုသေးကြောင်းခိုင်လုံသောမည်သည့်အထောက်အထားမျှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌မရှိချေ။
ဤအချက်အကျဉ်းချုပ်သည်၎င်းတို့၏သက်သေပြချက်များဖြစ်ပေ၏။သို့သော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည့်အချက်ကား၊ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့အခြေအမြစ်မရှိ၊အထောက်အထားမခိုင်လုံသော၊အကီးဒါများကြောင့် မြောက်များ စွာသော မွတ်စလင်များကို မိုရ်ှရေက်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့၏အသက်၊ စည်းစိမ်ကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ဟုခံယူကာ၊မြောက်များစွာ သောမွတ်စလင်များ၏သွေးကိုမြေ၌ကျစေခဲ့ပြီးစည်းစိမ်မြောက်များစွာကိုမတရားလုယူကာသုံးစွဲခဲ့ကြပေသည်။
ဤနေရာအထိကျွန်တော်အနေဖြင့်ဝဟာဘီတို့၏အကီသာများနှင့် ပက်သက်ပြီးသိရှိထားလျှင်ကောင်းမည်ဖြစ်၍ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးမူရင်း ခေါင်း စဉ် توسّل ဘက်သို့ပြန်လှည့်ပြီးအဖြေထုတ်တင်ပြပါမည်။
“သဝါစိုလ်”အဘိဓာန်၌ဝဇီလာအမှီသဟဲရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဝဇီလာဆိုသည်မှာလူသားအားအခြားတစ်ဦးနှင့်နီးစပ်အောင်လုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါ သည်။ ကျော်ကြားသောအဘိဓာန် لسان العرب၌အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်နီးကပ်စေရန်အမှီသဟဲ၊ဝဇီလာ၊သတ်မှတ် ခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။ဝဇီလာဟုဆိုရာ၌လည်းလူသားအားအလ္လာဟ်အရှင် မြတ်နှင့်နီးကပ်အောင်ပြု၍လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုခေါ်ဆိုပါသည်။
အဘိဓာန်စာအုပ် مصباح اللغةပါရှိသည်မှာ-
ဤအာယတ်တော်၌အမိန့်(၃)ခုပေးထားပေသည်။ပထမအမိန့်သည်သက္ကဝါဖြစ်ပြီး၊ဒုတိယအမိန့်သည်ကားဝဇီလာရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ထိုဝဇီလာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်နီးစပ်မှု၊နီးကပ်မှုကိုပြုပေးသောအရာဖြစ်ရပေမည်။တတိယအမိန့်သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်း၌ဂျေဟဒ်ဖြစ်ပေသည်။ဤ(၃)ခု၏ရလဒ်သည်နောက်ဆုံးအာယတ်၏အစိတ်အ ပိုင်းဖြစ် သော لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَအသင်တို့အောင်မြင်မှုကိုဆွတ်ခူးကြလေဟုဖြစ် ပေ၏။
“အို!တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၎င်းတို့အားအသင်အနေဖြင့်ပြော ကြားပါလေ။၎င်းတို့အနေဖြင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပအလ္လာဟ်ဟုထင်ပြီးတမ်းတသောသူများသည်အမှန်တကယ်အသင်တို့၏မည်သည့်အခက်အခဲကိုမျှဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ထို့အပြင်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ် ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။”
قُلِ ادْعُوا الَّذِين ဆိုသည့်ဝါကျကိုဂရုပြုခြင်းဖြင့်ရုပ်ထု၊ဆင်းတု ၊ထိုကဲ့သို့ သောအရာများကိုမိန့်ထားခြင်းမဟုတ်ချေ။အကြောင်းသည်ကား- الَّذِين သုံးခြင်းဖြင့်အသိဥာဏ်ရှိသူများကိုသာဆိုလိုသည်။တနည်းဆိုရလျှင်၎င်းတို့အနေဖြင့်ကိုးကွယ်ကြသောကောင်းကင်တမန်များ(သို့)ဟဇရတ်(သ)အီဆာ(အ.စ)ကိုဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသူများသည်ကောင်းကင်တမန်များ(သို့)ဟဇရတ်(သ)အီဆာ(အ.စ)ကိုယ်တိုင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတွင်ကိုယ်တိုင်တောင်းခံသူများဖြစ်ကြ ပြီး၊အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်နီးကပ်မှုရရှိရန်ဝဇီလာရှာဖွေသူများဖြစ်ကြ သည်။
ထိုဝဇီလာသည် أَيُّهُمْ أَقْرَبُဝဇီလာတိုင်းထက်နီးကပ်မှု၊နီးစပ်မှုကို ပို၍ပြုနိုင်သောအရာဖြစ်ပေသည်။ထိုအရာသည်ကား وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရဟ်မသ်အားမျှော်ကိုးခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့အပြင် وَيَخَافُونَ عَذَابَه အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အပြစ်ဒဏ်၊အဇပ်ကြောက်ဖို့တိုက် တွန်းသောအရာ ဖြစ်ပေသည်။
အကြောင်းသည်ကား مَحْذُوراً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ ၏မုချဧကန် အသင်တို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အပြစ်ဒဏ်၊အဇပ်သည်လူတိုင်းကြောက် လန့်ကြမည်ဖြစ်ပေသည်။
ဝဟာဘီများ၏အကြီးမားဆုံးမှားယွင်းမှုသည်ကား-အလ္လာဟ်အ ချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း၏ဆိုလိုချက်ကိုမှားကောက်ခြင်းဖြစ်ပေ သည်။၎င်းတို့အနေဖြင့် အလ္လာဟ်အချစ်တော် اولياءاللهနှင့်သဝါစိုလ်ပြု ခြင်းကို كاشف الضر (အဓိပ္ပါယ်မှာအခက်အခဲများ၊သောကဒုက္ခများကိုဖယ် ရှားပေးနိုင်သည်။ထို့အပြင်တိုက်ရိုက်အလုပ်များအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)ထင်နေကြပေသည်။
အမှန်တကယ်သဝါစိုလ်၏ဆိုလိုချက်အဓိပ္ပါယ်သည်ဤကဲ့သို့မ ဟုတ်ချေ။ဝဟာဘီများအနေဖြင့်သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးအထောက်အ ထားသက်သေအဖြစ်တင်ပြသောအာယတ်သည်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ဆိုင် သောအာယတ်ဖြစ်၏။မည်သည့်(မွတ်စလင်)မှအလ္လာဟ်အချစ်တော်များကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟုသတ်မှတ်၍အေဘာဒသ်မပြုကြချေ။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှဖိတ်ခေါ်အမိန့်ပေးထားသောဝဇီလာဆိုသည်မှာအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီးစပ်မှုကိုဖြစ်စေသောအရာကိုဆိုလို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာဤပုဂ္ဂိုလ်များ (اولياءالله)အနေဖြင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ်ရှာဖာအတ်(အသနားခံပေးရန်)ပြုပေးခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရှာဖာအတ်အခန်းကဏ္ဍ၌ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပေသည်။
အမှန်တကယ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျှင်ရှာဖာအတ်နှင့်သဝါစိုလ်၏အဓိပ္ပါယ်များသည်အတူတူပင်တည်း။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌သဝါ စိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးအာယတ်တော်နှစ်ပါးသာပါရှိပြီးရှာဖာအတ်နှင့်ပက် သက်၍အမြောက်အများပါရှိပေသည်။မှတ်သေားစရာအချက်သည်ကားစူ ရာဟ်ယေ မာအေဒါအာယတ်တော်၅၇၌ပါရှိသော أقرب أيّهمဝါကျဖြစ်ပါ သည်။ကောင်းကင်တမန်တော်များနှင့်ဟဇရတ်(သ)အီဆာ(အ.စ)တို့သည်လည်းပဲမိမိတို့အတွက်ဝဇီလာရွေးခဲ့ကြပါသည်။ဝဇီလာသည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးပြုသောအရာဖြစ်၏။ همအများကိန်း၊သက်ရှိအ တွက်၊နာမ်စားကိုသုံးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်နှင့်သူတော် စင်၊သူတော်ကောင်းများနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီးသထက်နီးအောင်ပြုလုပ်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပေသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ်မိမိအားဝဇီ လာပြုသူများအတွက်ရှာဖာအတ်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဥပမာပေးရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်အနေဖြင့်လူကြီးသူကောင်းတစ်ယောက်ဆီသွားတွေ့လို သည့်အခါလူကြီးသည်ကျွန်တော်အားမသိသည့်သဖြင့်ထိုလူကြီး၏လက် အောက်လူအားတွေ့ခွင့်ပေးဖို့၊ရှာဖာအတ်ပြုပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းဖြစ် ပေသည်။
၎င်းလုပ်ရပ်သည်ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။မိမိအရည်အသွေးကိုလျော့ချခြင်းလည်းမမည်ပေ။ဤနေရာ၌ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဗအေလဝီး၏နာမည်ကြီးစာအုပ် مفاهيم يجب أن تصحّح ပါအချက်များကိုဖေါ်ပြရန် သင့်တော်လျောက်ပတ်သည်ဟုယူဆပါသည်။
၎င်းအနေဖြင့်ရေးသားထားသည်မှာ-မြောက်များစွာသောလူထု သည် توسّل၏အမှန်တကယ်ဆိုလိုချက်ကိုမသိနားမလည်ကြပေ။ဤအ တွက်ကြောင့် توسّل၏ဆိုလိုချက်အမှန်အကန်မဖေါ်ပြမည့်အလျှင်အချို့အ ချက်အလက်များကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်ပေသည်။
၁။ توسّلဒိုအာပြုနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။အမှန်တကယ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်နှင့်နီးစပ်မှုကိုဖြစ်စေသောတံခါးများမှတံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏နီးကပ်မှု၊နှစ်မြို့မှုမှအပအခြားသူများအတွက်ဖြစ်ပါကမိုရ်ှရေက်ဖြစ်ပေသည်။
၂။မည်သူမဆိုတစ်ဦးယောက်နှင့်သဝါစိုလ်ပြုပါကအချစ်မေတ္တာမြတ်နိုးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ပြီးနောက် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သည်၎င်း အား(သဝါစိုလ်ပြုခံရသူအား)နှစ်မြို့ပေသည်။အကယ်၍အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်မဟုတ်ဟုသိလျှင်၎င်းထံမှအပြီးအပြတ်ဖြတ်လေ၏။၎င်းအားဆန့်ကျင်ပေမည်။မှန်လှပေသည်။၎င်းတို့အမြင်၌အဆင့်အတန်းသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အနေဖြင့်၎င်းအားမည်မျှချစ်မြတ်နိုးသနည်းဆိုသောအချက်ဖြစ်ပေသည်။
၄။သဝါစိုလ်ဝါဂျစ်(ပ)မပြုမနေသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ချေ။ဒိုအာကိုက ဘူလ်ဖြစ်စေသောတစ်ခုတည်းသောလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်၍မရချေ။ဒိုအာအရေးကြီးပေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံဝယ်အချိန်မရွေးတောင်းခံ နိုင်ပေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူထားသည်မှာ-
توسّل إلى الله بالأعمال الصّالحة ဖြစ်ပေသည်။လူသားအနေဖြင့်ကောင်း မြတ်သောကောင်းမှု၊ကုသိုလ်များဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏နီးကပ်မှုကို ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။သာဓကအားဖြင့်မည်သူမဆိုရိုဇာထားမည်။နမာဇ်ဖတ်မည်။ကုရ်အာန်ဖတ်ရွတ်မည်။ဆဒ်ကာပေးလှူမည်။ဤကောင်းမှုကုသိုလ် များဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီးစပ်မှု၊နီးကပ်မှုရရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပေ သည်။ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍မည်သည့်(အသိဥာဏ်ရှိသူ)ကမျှမငြင်းထား ပေ။အကွဲအလွဲလည်းမရှိချေ။သဝါစိုလ်တစ်မျိုးကိုဝဟာဘီ(စလ်ဖီးများ) ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားပါသည်။
အဗ်နေသိုင်းမီးယာကိုယ်တိုင်၎င်းကိုစာအုပ်များ၌အထူးသဖြင့်ရေ စာအေ القاعدة الجليلة فى التوسّل و الوسيلة၌ဖေါ်ပြရေးသားထားပေသည်။
အဗ်နေသိုင်းမီးယာသည်ကောင်းမြတ်သောကုသိုလ်များဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းကိုလက်ခံထားပေသည်။
ထို့နောက်ဗင်အလီဝီးအနေဖြင့်ဆိုလိုချက်ကိုဆက်လက်ရေးသား သည်မှာ- ဤအဓိပ္ပါယ်၌ဝဟာဘီများအနေဖြင့် အလ္လာဟ်အချစ်တော် اولياءاللهနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း၌ကွဲလွဲမှုသည်စကားလုံးအရကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေ သည်။အကြောင်းသည်ကား- အလ္လာဟ်အချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း သည်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောကုသိုလ်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းဖြစ် ပေသည်။ ပြုပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်။
ဆက်လက်၍ရှင်းလင်းရေးသားသည်မှာ-မည်သူမဆို အလ္လာဟ် အချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုပြီးလျှင်၎င်းအားချစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။
အဘယ်ကြောင့်ချစ်ရပါသနည်း?ချစ်ရသည့်အကြောင်းသည်ကားလည်းသဝါစိုလ်အပြုခံရသူနှင့်ပက်သက်၍ဤကဲ့သို့ယုံကြည်ထား၏။၎င်း သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အားအချစ်ထားသူဖြစ်မည်။(သို့)၎င်းအား အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကချစ်မြတ်နိုးပေသည်။(သို့)ဝဇီလာကိုလက်ခံသ ဘောတူသူဖြစ်၏။ဤကဲ့သို့စစ်ဆေး၊စူးစမ်းပြီးသဝါစိုလ်ပြုမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမြတ်သောလုပ်ရပ်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ဤအချက်ကို မွတ်စလင် တိုင်းလက်ခံထားပေသည်။
သဝါစိုလ်အပြုခံရသူများသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံဝယ် သိက္ခာ၊သမာဓိရှိသူများအလ္လာဟ်အချစ်တော်ဂုဏ်ရှိသူများစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍၎င်းတို့ကတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သူများဟုမခံယူဘဲ၊ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံ၌ရှာဖီး(အ)အသနားခံပေးသူများအဖြစ်လက်ခံ မည်ဆိုလျှင်၊ဤကဲ့သို့သောသဝါစိုလ်သည်ကုဖ်လည်းမဟုတ်ချေ။ကွဲလွဲစရာလည်းမဟုတ်ချေ။
ဘယ်သို့ဆိုစေကျမ်းတော်မြတ်၌ဤကဲ့သို့သောသဝါစိုလ်နှင့်ပက် သက်ပြီးညွန်ပြထားပါသည်။ရှေရ်က်ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဲ့သို့တစ်ဦးတစ်ယောက်အားတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုနိုင်၊ဆုံးရှုံးမှုပေးနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။(တစ်နည်းဆိုရလျှင် အလ္လာဟ်နှင့်ယှဉ်တွဲခြင်းဖြစ်ပေသည်။)
ဝဟာဘီများ၏လွဲမှားမှု၊သည်အေဗာဒ်(عبادت )နှင့်ရှာဖာအတ်သ် (شفاعت )စကားလုံးနှစ်လုံးကိုအောက်ဖေါ်ပြပါအာယတ်တော်၌ရောနှော သွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပါသဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်သောအာယတ်တော်နှင့်ညီသော၊အစ္စလာမ်အကီသာနှင့်မဆန့်ကျင်သောသဝါစိုလ်မှန်သမျှသည်မှန်ကန်ပေသည်။တစ်နည်းဆိုရလျှင်လိုအပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ تواترသို့ تواترအဆင့်နီးပါးရောက်သည်အထိရီဝါယတ်တော်အများအပြား သဝါစိုလ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ပါရှိပေသည်။
မြောက်များစွာသောရီဝါယတ်တော်များသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ပါရှိပေသည်။ထိုသဝါစိုလ်များ သည်လည်းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားမီးရှူးမသန့်စင်ခင်၊မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်ပြီးနောက်၊ဘဝ၌ပရိတ်နိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်နှင့်ပက်သက်နေပေသည်။
အချို့ရီဝါယတ်တော်များသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အပြင်အ ခြားသာသနာအကြီးအကဲများနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းအကြောင်းကိုဖေါ်ပြထား ပါသည်။
ဆက်လက်၍ဖေါ်ပြရမည်ဆိုလျှင်ရီဝါယတ်တော်များသည်အချို့ သည်ဒိုအာပုံစံ၊အချို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံရှာဖာအတ်သ်တောင်းခံ ခြင်းသဏ္ဌာန်၊အချို့သည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ကတိတော်အား အလ္လာဟ်ထံဝဇီလာပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။အကျဉ်းချုပ်ဆိုရလျှင်သဝါစိုလ်၏အမျိုးအစားများအားလုံးကိုဤရီဝါယတ်တော်များ၌တွေ့ရှိရပေမည်။ဝဟာဘီများ၏အကြောင်းပြချက်တိုင်းအတွက်လမ်းပိတ်သွားပေမည်။
၁။တမန်တော်မြတ်ကြီးအာဒမ်(အ.စ)အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အားဝဇီလာပြုခဲ့ခြင်းသဝါစိုလ်ပြုခဲ့ခြင်း၊ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မမွေး ခင်အလျင်ကဖြစ်ပေသည်။ حاكمအနေဖြင့်မိမိကျမ်း مستدرك၌ဟဒီးစ်ပါရဂူ အုပ်စုတစ်စုထံမှတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူသည်မှာ-ဟဇရတ်(သ)အာဒမ် (အ.စ)အနေဖြင့်သဲရ်ကေအောင်လာ-(အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမြင်၌အပြစ် မဟုတ်သော်လည်းနဘီအတွက်မသင့်တင့်မလျောက်ပတ်သောအလုပ်) ပြုမိချိန်၌အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံဒိုအာတောင်းဆိုသည်မှာ-
အသင်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကိုဘယ်လိုသိပါသနည်း ယခုအထိပြန်လည်မဆန်းစစ် ကြသေးပေ။
အို!မွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်!အဖြစ်အပျက်ကဤကဲ့သို့ဖြစ် ပါသည်။အသင်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်ကျွန်ုပ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရူရ်ဝိညာဉ်ကိုမုတ်သွင်း၏။ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဦးခေါင်းကို ထောင်မော့ကြည့်ရာအရ်ရ်ှတော်၏တိုင်များ၌ရေးသားထားသောဝါကျကို တွေ့ရပါသည်။
انه لااَحَبُّ الخلق إلىّ၎င်းမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည်ကျွန်ုပ်၏အဖန်ဆင်းခံများ၌ ကျွန်ုပ်အချစ်ရဆုံးသူဖြစ်ပေသည်။
၂။အခြားဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ်မှာဟဇရတ်သ်အဘူသွာလစ်ပ်(အ.စ)အနေ ဖြင့်ဟဇရတ်သ်ရစူလေခိုဒါ(ဆွ)၏ကလေးဘဝတွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)နှင့်သဝါစိုလ်ပြုခဲ့ကြောင်းပြဆိုသောဟဒီးစ်ဖြစ်ပါသည်။ဟဒီးစ်၏အ ကျဉ်းချုပ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပေသည်။
ابن عساكرအနေဖြင့်မိမိ၏စာအုပ် فتح البارى၌တင်ပြထားသည်မှာ-မက္ကာရွှေမြို့ တော်တွင်ကပ်ဆိုက်သည့်အခါကိုရိုင်ရ်ှလူမျိုးများသည် ဟဇရတ်သ်အဘူ သွာလစ်ပ်(အ.စ)ထံ ရောက်လာကြပြီး လွင်ပြင်အားလုံး (နိုင်ငံတွင်းဒေသအားလုံး)ခြောက်သွေ့သွားလေသည်။ကပ်ဆိုက်လာသည်ဖြစ်သဖြင့်ငါတို့ကအ် ဗာကျောင်းတော်သို့ သွားပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ မိုးအတွက် ဒိုအာတောင်းကြမည်ဟုပြောဆိုကြလေ၏။
ဟဇရတ်သ်အဘူသွာလစ်ပ်(အ.စ)သည်ကလေးငယ်(တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ))နှင့်အတူဒိုအာတောင်းရန်ထွက်လေ၏။ထိုကလေးငယ်၏ မျက်နှာသည်ထွန်းလင်းတောက်ပနေပါသည်။ကလေးအားချီကာကအ်ဗာ ကျောင်းတော်ကိုကျောပြုပြီးဤကလေးငယ်(တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)) အားသဝါစိုလ်ပြု၍တောင်းလေ၏။ထိုအချိန်၌မိုးတိမ်များမရှိရာမှ၊မိုးတိမ်များ ဖြစ်ထွန်းကာမိုးရွာသွန်းလေ၏။မည်မျှပင်ရွာသွန်းသည်ဆိုလျှင်လွင်ထီးခေါင်ပြင်များသည်စိမ်းလန်းစိုပြည်သွားလေ၏။
အဓိပ္ပါယ်မှာ-ထွန်းလင်းတောက်ပ၊ကျက်သရေရှိသောမျက်နှာတော် (တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မျက်နှာတော်)အတွက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းနေပါသည်။အဖမဲ့ကလေးများနှင့်မုဆိုးမများအတွက်အကျိုးပြုအားကိုး၊အားထားရမည် ဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်မျက်မမြင်တစ်ဦး သည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားခစားပြီးနောက်မျက်စိပြန်မြင်လာ ကြောင်းစဟီးသေရ်မေဇီး၊စိုနန်အဗ်နေမာဂ်ျ၊မွတ်စနက်ဒ်အဟ်မဒ်နှင့်အခြားကျမ်းများ၌ပါရှိပေသည်။
မျက်မမြင်တစ်ဦးသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားခစားလာပြီး၊အိုတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအားသက်သာကောင်းမွန် စေပြီး၊ပြန်မြင်လာစေရန်၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ်တောင်းဆို ပေးတော်မူပါဟုလျောက်ထားလေ၏။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူသည်မှာ-အကယ်၍ဒိုအာ တောင်းဆိုပေးပါမည်။မျက်စိမမြင်ရသည့်အတွက်သည်းခံရမည်ဆိုလျှင် လည်းသည်းခံပါလေ။ဤသည်းခံမှုသည်အသင်အတွက်ပိုကောင်းပေမည်။ (၎င်းအားမျက်စိမမြင်ခြင်းသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှကောင်းမြတ်သည့်စီစဉ်မှု တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။)
သို့သော်လည်းပဲထိုသူအနေဖြင့်ထပ်၍ရှာဖာဖြစ်ဖို့အတွက်ထပ် တောင်းလေ၏။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ထိုမျက်မမြင်အားဝိုဇူပြည့် ပြည့်စုံစုံပြုပြီး(၂)ရကအတ်နမာဇ်ဖတ်ရန်အမိန့်ပေးလေ၏။နမာဇ်ပြီးဆုံးလျှင်ဤဒိုအာကိုဖတ်ရန်မိန့်တော်မူလေ၏။
အို!ဟဇရတ်သ်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကျွန်တော်အနေဖြင့်အသင်၏ဝဇီလာပြု ပြီးမိမိလိုအင်ဆန္ဒအားပြည့်ဝစေရန်အတွက်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံ တောင်းဆိုပါ၏။
ဤဟဒီးစ်တော်၏ရဝီး(ရီဝါယတ်တော်တင်ပြသူ)အွစ်မန်းဗင်အိုမိုင်းရ်အနေ ဖြင့်တင်ပြသည်မှာ-ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုနေရာ၌ထိုင်ဝိုင်းတွင်ရှိ ခဲ့ပါသည်။အချိန်သိပ်မကြာခင်လေးအတွင်း၎င်းမျက်မမြင်သည်မျက်စိပြန် မြင်လာလေ၏။စိတ်ဝင်စားစရာအချက်သည်ကားဤဟဒီးစ်တော်နှင့်ပက်သက်၍မြောက်များစွာသောစွန်နီသာသနာပညာရှင်အကြီးအကဲများအနေ ဖြင့်မှန်ကန်သောဟဒီးစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံထားလေ၏။သေရ်မီးဇီးအနေဖြင့်ဤဟဒီးစ်တော်အားမှန်ကန်ကြောင်းဆိုထားလေ၏။အဗ်နေဟဂျာအနေဖြင့်လည်းမှန်ကန်သည်ဟုဆိုထားလေ၏။ရဖာအီးအနေဖြင့်လည်းဤဟဒီးစ်တော်အားမှန်ကန်မှုနှင့်ကျော်ကြားမှု၌သံသယမရှိကြောင်းဆိုထား လေ၏။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောစွန်နီအိုလမာများအထဲမှဒါရဝီးအမည်ရှိ အာလင်ပညာရှင်တစ်ပါးအနေဖြင့်မိမိ၏စာအုပ်စိုနန်နိုဒါရေမီး(سنن دارمى)၌
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဂူဘိမာန်ဆီသွားပြီးဂူဘိမာန်၏ခေါင်းမိုးကိုအ ပေါက်ပြုလုပ်ပြီးအဖြေစောင့်မျှော်ပါလေ။၎င်းတို့အနေဖြင့်ထိုအတိုင်းပြုလုပ်လေရာမိုးအရမ်းရွာသွန်းလေရာလွင်ထီးခေါင်ပြင်များစိမ်းလန်းစိုပြည်ပြီးပိန် သေးနေသောကုလားအုတ်များဝဖြိုးလာလေ၏။
အို!အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)အားဝဇီလာပြုချိန်တိုင်းမိုးရွာသွန်းလေ၏။ယခုတမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဦးရီးတော်အားဝဇီလာပြုပါ၏။မိုးရွာသွန်းပေးသနားတော်မူပါဟုဒိုအာတောင်းဆိုလေ၏။
အဗ်နေဟဂျရ်မက္ကီအနေဖြင့်မိမိ၏စာအုပ်စာဝါအေက်(صواعق )၌ အေမာမ်ရှာဖီအနေဖြင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)နှင့်သဝါစိုလ်ပြုခဲ့သောနာမည် ကြီးကဗျာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထား၏။
ကေယာမတ်နေ့၌၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုရန်ကျွန်တော်၏ပြုလုပ်ခဲ့ သောနာမေအအ်မာလ်(نامه اعمال )အားကျွန်တော်၏ညာဖက်၌အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သည်ပေးအပ်တော်မူမည်ဟုမျှော်လင့်ထားပါ၏။
ဤဟဒီးစ်တော်အား رفاعى (ရဖာအီး)အနေဖြင့်မိမိစာအုပ် التوصّل إلى حقيقة التوسّل كتاب
သို့သော်ဤစာအုပ်ရေးသူ رفاعىသည်သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်စီစစ်သူ၊သုတေသီပြုပြီးတင်ပြသူဖြစ်ပေသည်။၎င်းအနေ ဖြင့်စွန်နီပညာရှင်များ၏အကိုးအကားကျမ်းစာအုပ်အသီးသီးမှသဝါစိုလ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး၊ဟဒီးစ်တော်၂၆ခုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးအချို့ဟဒီးစ်တော်များအားပယ် ဖျက်ခဲ့လေ၏။သို့သော်အချို့ဟဒီးစ်တော်များအားဟဒီးစ်ပညာအရသဝါသိုရ် (تواتر)အထိအဆင့်ရောက်ရှိနေပြီးကျော်ကြားသောစွန်နီကျမ်းဂန်များ၌ပါရှိ နေသဖြင့်မပယ်ဖျက်ဘဲလက်ခံထားပေသည်။
တယူသန်၊အစွန်းရောက်ဝဟာဘီများအနေဖြင့်သဝါစိုလ်အားလက်ခံသောမွတ်စလင်များကိုကာဖေရ်၊ဖာစစ်က်စသည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်နိုင်ရန်၊ကလေးငယ်များကဲ့သို့(ဗဟာနာ)ရှာပြီးဆိုလေ၏။အမှန်တကယ်အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးမည်သို့မျှ ပြဿနာရှာ၍(သို့)စောဒကတက်၍သော်၎င်း၊မရချေ။
တစ်ခါတလေအလ္လာဟ်အချစ်တော်များ၊သူတော်စင်၊သူတော် ကောင်းများ၏ကတိတော်အားဝဇီလာပြုခြင်းကို“ဟရမ်”ဟုဆိုလေ၏။သို့ သော်၎င်းတို့၏အရိုက်အရာ၊အဆင့်အတန်းကိုဝဇီလာပြုခွင့်ရှိ၏ဟုဆိုထား ပြန်၏။တစ်ခါတလေအလ္လာဟ်အချစ်တော်များကို၎င်းတို့အသက်ထင်ရှားရှိနေစဉ်ဝဇီလာပြုနိုင်ကြောင်း၊ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အ သွယ်ဖြတ်သွားသဖြင့်ဝဇီလာမပြုနိုင်ကြောင်း၊အကြောင်းသည်ကား-
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကအမိန့်ပေးထားသောသဝါစိုလ်သည် သောင်ဟီးဒ်ဖအာလီး(သို့)သောင်ဟီးဒ်အေဗာသီးနှင့်မဆန့်ကျင်သောသဝါစိုလ်မှန်သမျှကိုအမိန့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေ ဖြင့် وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ဆိုထားရာ၌အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီး ကပ်အောင်ပြုလုပ်သောဝဇီလာမှန်သမျှကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီးစပ်အောင်၊နီးကပ်အောင်ပြုလုပ်သည်အရာမှန်သမျှကိုဝဇီလာအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍တမန် တ်ာမြတ် ကြီး(ဆွ)၏ဒိုအာ၊တမန်တော်မြတ်ကြီ်း(ဆွ)၏ရှာဖာအတ်သ်၊ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အဆင့်အရိုက်အရာနှင့်ဇာတိတော်(တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်တသွေမတိမ်းအလ္လာဟ်အမိန့်ကိုနာခံကျင့်သုံးပြီး၊ဗန္နာ တော်ပီသ၊သည့်အတွက်ကောင်းသောအရည်အသွေး၊အရည်အချင်း၊များ ကြောင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်၌နီးစပ်မှု၊နီးကပ်မှုကိုရထားသူဖြစ် ပေသည်။
၎င်းအရာအားလုံးအားဝဇီလာအဖြစ်သတ်မှတ်ကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ထို့အတွက်ကြောင်ဝဟာဘီများကဲ့သို့ဝဇီလာသည်ကောင်းသောလုပ်ရပ်၊ ကောင်းမှု၊ကုသိုလ်များသာဖြစ်ပါသည်ဟုပြောဆိုရန်အထောက်အထား သက်သေအသင့်မရှိတော့ချေ။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဝဇီလာများကိုတင်ပြရာ၌သောင်ဟီးဒ်ဒေအေ ဗာဒီးနှင့်လည်းမဆန့်ကျင်ပေ။အကြောင်းသည်ကား-ကျွန်တော်တို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ချေ။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းကိုသာခဝပ်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ထို့အပြင်သောင်ဟီးဒ်ဒေအဖ်အာလီနှင့်လည်းမဆန့်ကျင်ပေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အ ကျိုးအမြတ်၊အဆုံးအရှုံးကိုပေးနိုင်သောဇာတိသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ဇာတိတော်တည်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီး၊၎င်းအရှင်ဘက်မှလူတိုင်းကို(နေအ်မသ်ရဟ်မသ်စသည်ဖြင့်…….)ချီးမြှင့်ထားတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းအရှင်၏ဝဇီလာဖြစ်ပေသည်။
သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရှိနေသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ပူပင်သောက၊ကြောက်ဖို့မလိုပေ။အကြောင်းသည်ကားသာဓကအားဖြင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်ရှိပေ သည်။မိန့်တော်မူသည်မှာ-
ဤနေရာ၌“ဗဟာနာ”အကြောင်းမရှိ၊အကြောင်းရှာပြီးကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်အားမတ်တပ်ရပ်၍ဖတ်ရွတ်ရမည်လော!မဖတ်ရွတ်ရမည် လော! (သို့)အိပ်စက်နေသည့်အချိန်၌ဖတ်ရွတ်ရမည်လော!ဟုပြောဆိုနိုင် ပေသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌(အထက်ပါကဲ့သို့)ခြုံငုံ၍သုံးထားသောအာယတ်တော်များမှန်သမျှ၊ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိမခြင်း၊ခြုံငုံ ထားကြောင်းဖြစ်ပေသည်။ထိုနည်းတူစွာအာယတ်တော်သဝါစိုလ်သည် လည်း ခြုံငုံ၍ဖေါ်ပြထားသဖြင့်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထား(ရှာရီအီ)မရှိမခြင်း၊ခြုံငြုံထားချက်အပေါ်လိုက်နာကျင့်သုံးရပေမည်။ ဗဟာနာလုပ်သူများကိုယုံဖို့မလိုချေ။
သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးရီဝါယတ်တော်များအချို့ကိုအထက်၌ဖေါ် ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။မြောက်များစွာသောရီဝါယတ်တော်များသဝါစိုလ်အ မျိုးမျိူးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးပြုခွင့်ပေးထားပေသည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ကိုယ်တိုင်အားသဝါစိုလ်ပြုခြင်း၊သာဓကအားဖြင့်မျက်မမြင်အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုယ်တိုင်အားသဝါစိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအဖြစ်အ ပျက်ဖြစ်ပါသည်။
အဖြေသည်ကား- တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်၏အမိန့်အားတစ်သဝေမတိမ်း၊လိုက်နာကျင့်သုံးသောသူ၊အလ္လာဟ်ကျေးကျွန်အစစ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်သဝါ စိုလ် ပြုလုပ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ကိုယ်တော်၏(ကောင်းမြတ်သော)လုပ်ရပ်များ၊လိုက်နာကျင့်သုံးမှုများ၊အေဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုများနှင့်သဝါစိုလ် ပြုခြင်းဖြစ်ပေ၏။
အံ့ဩဖို့ကောင်းသောအချက်သည်ကား-၎င်းဝဟာဘီများထဲမှအ ချို့သည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အလန်မ်မေဗရ်စာက်ခ်(သေပြီးနောက် ကေယာမတ်မဖြစ်မှီအထိဘဝ)ဘဝကိုငြင်းဆိုကြပြီးကိုယ်တော်ဝဖါသ်(وفات )ကိုကုဖ္ဖါ(كفّار)များ၏သေဆုံးခြင်းအဆင့်အထိသာလက်ခံထားပေသည်။
(عالم برزخ)လက်ခံသဖြင့်၊၎င်းတို့၏စောဒကတက်မှုအားပြန်လည်၊ရုတ်သိမ်း ရပေလိမ့်မည်။
၂။ဂါလီغاليများ နှင့်အေဖ်ရသ်သီး افراطيများ***
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လိုတိုး၊ပိုလျော့လုပ်သူများ၊အုပ်စုနှစ်စုအကြားဘဝတည်ဆောက်နေရပါသည်။(၎င်းတို့အနက်မှ)တစ်အုပ်စုသည်သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်ရီဝါယတ်တော်များတွင်ခွင့်ပြု ထားသည်ကိုအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားသည်ဟုထင် ကြေးပေးပြီးပြဿနာရှာကာဟရမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပေသည်။အမှန်တ ကယ်အထင်မှားလမ်းလွှဲနေသူများဖြစ်ပေသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း၊၎င်းတို့၏လိုက်နာကျင့်သုံးမှုများ၊အေဗာဒသ်များ၊လုပ်ရပ်တော်များ၊ဂူဗိမာန်များကိုဝဇီလာပြုရသဖြင့်၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်နီးစပ်အောင်၊နီးကပ်မှုကို သာဖြစ်စေပါသည်။သောင်ဟီးဒ်နှင့်သာကိုက်ညီနေပြီးအလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်ထံမှသာရယူလိုခြင်းဖြစ်ပြီး(اولياءالله) (အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ် တော်များ၏ဂူဗိမာန်စသည်တို့အား၊အမှီသဟဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံယူ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဒုတိယအုပ်စုသည်ကား-အေဖ်ရသ်သီများ ဖြစ်ကြပါသည်။သဝါစိုလ် လုပ်ရာတွင်ဂူလူ(غلوّ )အဆင့်ရောက်သည်အထိလုပ်ကြလေ၏။ဤအုပ်စု၏ အန္တရာယ်သည်လည်းပထမအုပ်စုထက်မသေးချေ။
ဤဥပဒေသသည်ကိစ္စတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေသည်။အကီသာကိစ္စဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးကိစ္စဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ဤကဲ့သို့သော်အုပ်စုနှစ်စုသည်တစ်စုရှိလာလျှင်နောက်တစ်စုသည်လည်းပေါ်ပေါက်လာရပေသည်။ဆိုလိုသည်ကကိစ္စတစ်ခုကိုအတိုင်းထက်အလွန်လုပ်လာလျှင်၊ဆန့်ကျင်ဘက် အုပ်စုသည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာရပေမည်။အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည်အန္တရာယ်များပေသည်။
အမှန်တကယ်သဝါစိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့နှင့်သဝါစိုလ်ပြုရမည်ဆိုသောအချက် ဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရပါသနည်း?
၎င်းတို့၏ကောင်းမြတ်သောအလုပ်များကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှင်များ ဖြစ်ရပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်းကောင်းမွန်၊ကောင်းမြတ်သောအလုပ်များဖြင့်အရှေ့တိုးရပေမည်။သဝါစိုလ်မကျွန်ုပ်တို့အားအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံနီးကပ်မှု၊နီးစပ်မှုကိုရယူဖို့ကောင်းမြတ်၊ကောင်းမွန်သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ချည်းကပ်ရမည်ဟုသင်ကြားပေးနေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်လည်း၎င်းတို့၏ ကောင်းမြတ်သောလုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့သည်ကောင်းမြတ်သောလုပ်ရပ်များကြောင့်အလ္လာဟ်ဟိုအ ရှင်မြတ်ထံဝယ်နီးစပ်မှုနှင့်၊နီးကပ်မှုကိုရရှိခဲ့ကြလေ၏။ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံရှဖာအတ်(သ)လုပ်ပေးရန်၎င်းတို့ထံမေတ္တာရပ်ခံခြင်း၊သဝါစိုလ်ပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။သဝါစိုလ်ကိုပစ်ဖယ်ရှောင်ရှားခြင်းမပြုဖို့သတိထားရပေမည်။သဝါစိုလ်၏ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များနှင့်လည်းမလွဲသွားအောင်ပြုလုပ်ဖို့မမေ့ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
(تشريعى )အ လုပ်များရှိသလို(تكوينى )အလုပ်များလည်းရှိပါသည်။နှစ်ခုစလုံးသည် ((تشريعى )အလုပ်များ၊(تكوينى )အလုပ်များ)သဝါစိုလ်သည်သောင်ဟီးဒ်နှင့် မဆန့်ကျင်ပေ။
မြေကြီးသည်မျိုးစေ့များကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးသည်။နေရောင် ခြည်များနှင့်မိုးရေစက်များသည်မျိုးစေ့၊အဖူး၊အပွင့်၊အသီး၊အရွက်၊ဘယ ဆေးပင်များ၊ဟင်းရွက်များကိုကြီးထွားဖွံဖြိုးစေပါသည်။ဤကဲ့သို့ထိုအရာ များ(မြေကြီး၊နေရောင်ခြည်၊မိုး...)များကြောင့်သီးနှံ၊စသည်ဖြင့်ဖြစ်ထွန်းလာပါသည်ဟုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာသောလောက(عالم اسباب)ကိုလက်ခံယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့်သောင်ဟီးဒ်အဖ်အာလီး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပါသလား?
သံသယမရှိဘဲ၊ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ဤယုံကြည်မှုအားမည်သူမျှ ငြင်းဆိုမည်မဟုတ်ဟုပြောလို့ရပေသည်။အကြောင်းသည်ကားကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် (عالم اسباب)အမှီသဟဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသောလော ကကိုလက်ခံထားပြီး၊အမှီသဟဲများ(ဝဇီလာများ)ကိုနောက်လိုက်သော်ငြားလည်းအရာရာကိုဖြစ်အောင်အကြောင်းအကျိုးစီစဉ်ပေးသောအရှင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းသာဖြစ်ကြောင်းခံယူထားပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော်အမှီသဟဲများနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်သောင်ဟီးဒ်နှင့်မဆန့်ကျင်ပေ။ထိုနည်းတူစွာအာလမ်မေသရ်ှရီး(عالم تشريع)တွင်အန်ဘီ ယာ၊အောင်လီယာ(တမန်တော်များ၊အလ္လာဟ်အချစ်ဝလီအောင်လီယာများ)နှင့်မအ်စူမာများဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း၊အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံဝယ်ရှဖာအတ်(သ)ပြုပေးဖို့၎င်းတို့ထံတောင်းခံခြင်းသည်သောင်ဟီးဒ်(တစ်ဆူတည်းဝါဒ) နှင့်လုံးဝမဆန့်ကျင်ပေ။
သို့သော်ငြားလည်းအေဖ်ရသီအုပ်စုတစ်စုပေါ်ပေါက်လာပြီး (عالم اسباب)ကိုလက်မခံကြပေ။၎င်းတို့အ နေဖြင့်(عالم اسباب)ကိုလက်ခံခြင်း ဖြင့်သောင်ဟီးဒ် အဖ်အာလီ(توحيد افعالى )အားဆန့်ကျင်သည်ဟုထင်နေကြ ပေသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့်မီးသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အနေဖြင့်အရာတစ်ခုကိုအနီးမကပ်၊မပေးခြင်းမလောင်နိုင်ချေ။ရေသည်လည်းအလ္လာဟ်အရှင် မြတ်သည်မီးအပူရောက်အောင်မပြုမခြင်း၊မငြိမ်းသတ်နိုင်ပေ။(ဆိုလိုသည်ကား-အလ္လာဟ်အလိုမပါဘဲမီးသည်လောင်လို့မရသလို၊ငြိမ်းသတ်လို့လည်း မရဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။
အမှန်တကယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌ပင်(عالم اسباب)တစ်ခု ကြောင့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရသည်။လောကနှင့်ပက်သက်ပြီးတရားဝင်မီး မောင်းထိုးပြထားပါသည်။မိန့်တော်မူထားသည်မှာ-ကျွန်ုပ်(အလ္လာဟ်)သည် မိုးရေများကိုခြောက်သွေ့နေသောမြေကြီးကိုစိုစွတ်စေရန်အတွက်နှင့်ပြန် လည်ရှင်သန်ရန်အတွက်ရွာသွန်းစေသည်။
( يحيى به )၏အဓိပ္ပါယ်ဆိုလိုချက်မှာ-ဤမိုးသီးမိုးပေါက်များသည် မြေကြီးအားပြန်လည်ရှင်သန်(စိမ်းလန်းစိုပြေ)စေသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ထွက်၏။အာယတ်တော်သည် (عالم اسباب)အားတရားသက်သေပြထောက်ခံနေပေ သည်။ဤကဲ့သို့မြောက်များစွာ(ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌)ပါရှိပေသည်။၎င်းအရာများသည်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်မလာချေ။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်က ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်အထက်ပါဖေါ်ပြထားသောအရာများကိုလေ့လာ သုံးသပ်ပြီး၊အစွန်းရောက်မှု၊တယူသန်မှုကိုလက်လွတ်ပြီးအမှန်တရားကိုရွေးချယ်ကြမည်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။ဤနည်းလမ်းဖြင့်အခြားမွတ်စလင်များအား ကာဖေရ်နှင့်ဖာစစ်က်ဖြစ်သည်ဟုဖသ်ဝါပေးခြင်းမှလည်းရှောင်ရှားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။